Tweetbot inogadziridzwa nediki asi inonakidza kugadzirisa | IPhone nhau
Tweetbot inogadziridzwa nediki asi inonakidza kugadzirisa
Mazhinji mafomu anowanikwa muApp Store anotibvumidza kufamba-famba pachiratidziro, sekunge tiri kubhurawuza, titendere isu Dzokera kumusoro nekukurumidza nekudzvanya padanho repabaroti, kapfupi kadikidiki iyo inodzivirira kuve nekutsvedza munwe wako pachiratidziro kunzvimbo yekutanga.
Dzimwe nguva izvi zvinogona kuve dambudziko kana tikangoerekana tarova iri repamusoro patinodzokera pakutanga kurasikirwa nechinzvimbo kwataive. Kana iri peji rewebhu, dambudziko rine mhinduro iri nyore kunze kwekunge isu tiri kuverenga imwe yeiyo isingagumi tambo dzatinogona kuwana paReddit. Asi kana vedu Twitter mutengi zvikaitika kwatiri, kutsamwa kunogona kuve kwakakura.
Tweetbot ndeimwe yeakanakisa vatengi veTwitter iyo yatinogona kuwana izvozvi muApp Store, mutengi uyo anotipa isu yakawanda nhamba yekugadzirisa sarudzo kuti tikwanise kuishandisa zvinoenderana nezvatinofarira uye zvatinofarira. Pese patinovhura iko kunyorera, pamusoro pechiso Inoratidza huwandu hwetweets dzakaburitswa kubva panguva yekupedzisira patakawana iko kunyorera. Kana isu tikabaya padanho repabha, yedu yenguva inotenderera kuenda kune yekupedzisira yakaburitswa tweet ichibvisa mucherechedzo wakaratidza izvo zvataive takamirira
Yazvino yekuvandudza kubva kuTweetbot, gadzirisa iri diki kana hombe dambudzikoSezvauri kuzvitarisa, zvichitibvumidza kudzoreredza chinzvimbo chekutanga nekudzvanya padanho repamusoro zvakare, kuti tidzokere kuchinzvimbo chepakutanga chenguva yedu kana tavhura.
Chimwe chinhu chitsva chinowanikwa mukuparadzaniswa mune ma tweets ane imwe mhando ye emoji, saka izvo zvatova havabatike zvakanyanya kumusoro neepasi tweeet. Ruzivo rwekupedzisira rweichi chiitiko neiyo Tweetbot inotora kune vhezheni 4.8 inotipa rutsigiro rwefonti nyowani inoshandiswa muIOS 11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tweetbot inogadziridzwa nediki asi inonakidza kugadzirisa
Muna Kubvumbi 2018 iyo SDK yeWatchOS 1 maapplication inomira kushanda
Iyo iPhone X yakafunga chimwe chezvakanakisa zvigadzirwa zve2017 maererano neTIME magazini